नाफामा गएपछि आईपीओ ल्यायौं— सतिषकुमार मोर,अध्यक्ष,लक्की ग्रुप – Maitri News
नाफामा गएपछि आईपीओ ल्यायौं— सतिषकुमार मोर,अध्यक्ष,लक्की ग्रुप
चर्चित औद्योगिक घराना लक्की ग्रुपका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । शिवम् सिमेन्टका प्रवद्र्धक समेत रहेका मोरसँग शिवम् सिमेन्टले पव्लिक कम्पनीको रुपमा पहिलो पटक प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा नेपालमा सिमेन्ट बजारको अवस्था, चुनौती, अवसर लगायत बिषयमा मोरसँग गरिएको कुराकानी :
मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
बजार बढिरहेको छ । भूकम्प पछि १०÷१२ प्रतिशतका ग्रोथ थियो । अहिले२० प्रतिशत ग्रोथ रहेको छ । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भूकम्पले पाठ सिकाएको छ । पूर्वाधार निर्माण विगतमा कमी थियो ।
अहिले पनि कम छ । तर, पूर्वाधारका परियोजना अघि बढेका छन् । स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारको निर्वाचन भएर मुलुक सम्वृद्धिमा अघि बढेकाले सिमेन्ट उद्योगको अवसर अझै बढिरहेको छ । किनकी मुलुक निर्माणमा अघि बढेको छ । अब आर्थिक क्रान्तिमै अघि बढ्ने हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा कच्चा पदार्थको अवस्था के छ ?
नेपालमा प्रचुरमात्रमा लाइन स्टोन रहेको छ । यसमा सरकारको इच्छाशक्ति भयो भने विकास गर्न सक्छौं । चुन ढुंगाको गुणस्तर पनि राम्रो छ । वन, खानीका नीतिगत समस्याले केही झंझट रहेको छ । वनको उपभोग गर्दा त्यतिकै क्षेत्रफलमा सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ । यसले केही समस्या हुन्छ । नेपालमा जग्गा किन्न भनेको निकै कठिन छ । धेरै क्षेत्रफलमा जग्गा पाउननै समस्या छ । चुन ढुंगा उपभोग गरेपछि त्यो जग्गा सरकारकै हुने हो । बरु सरकारले दस्तुर लिएर यो झन्झट हटाउनु पर्छ । वनमन्त्रीसँग समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । यो समस्या समाधान भए उद्योग सञ्चालन गर्न सघाउ पुग्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि सघाउ पुग्छ ।
नेपालमा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । आ–आफ्नो ब्राण्ड र क्वालिटी अनुसार मूल्य निर्धारण भैरहेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रमा कार्टे्लिङ गर्नु हुँदैन । सबैको आफ्नै सप्लाई सिस्टम र मूल्य रहेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको कार्टे्लिङ हटाउन पहल गरेको छ । त्यो सकरात्मक हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा अवसर देखेरै विदेशी कम्पनीले यहाँहरुसँग साझेदारिता गरेका हुन् ?
नेपालमा शिवम् सिमेन्ट परिवारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याएको छ । चीनको ३२÷३३ कम्पनी भएको होङ्सीलाई ल्याएका छौं ।
सबैले पार्टनरसीप गर्ने खोजे पनि उसले शिवम्लाई रोज्यो । ज्वाइन्ट भेन्चरमा हामीले काम गरेको हो । १५–१७ महिनामै सिमेन्ट उत्पादन गर्न सफल भएका छौं । यसले विदेशी साझेदारपनि उत्साहित भएका छन् ।
ठूला आयोजनाले अहिले पनि विदेशबाट सिमेन्ट ल्याइरहेका छन् । स्वदेशी सिमेन्टको गुणस्तर नभएर हो या अन्य कारण छन् ?
गुणस्तरको कारण होइन । बजारमा गुणस्तरको कुरा आए पनि सत्यता छैन । नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन । विदेशी परियोजनालाई सिमेन्ट र रडमा कर छुट दिएको कारण हो ।
हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं । छुट दिने हो भने स्वदेशी उद्योगलाई पनि दिनुपर्छ । विदेशी आयोजनामा सप्लाई गर्न कठिन भएको छ । चीन सरकारले बाहिरी रिङरोडमा विदेशबाट सिमेन्ट ल्याए कर छुट भए पनि उक्त परियोजनाले सिवम् सिमेन्टनै प्रयोग गरिरहेको छ । गुणस्तरीय नभएको भए उक्त आयोजनाले प्रयोगनै गर्ने थिएन । त्यसैले स्वदेशी उत्पादन निकै राम्रो छ।
सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना के छ ?
व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सिमेन्टमात्र होइन अन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त नेपालमै माग अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनौं ।
दुई छिमेकी मध्ये भारतमा सजिलो छ । चीनमा ढुवानी खर्च लागत धेरै पपर्छ । विहार र युपीमा ढुवानी लागत कम पर्ने भएकाले सजिलो हुन्छ । हामीले भारत निर्यात गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपालमा गुणस्तर चिन्ह (एनएस) आवश्यक भए जस्तै भारतमा निर्यात गर्नको लागि आइएसआई आवश्यक भएकाले शिवम्ले उक्त प्रमाण पत्र लिइसकेको छ।
सिमेन्ट उद्योग अझै फस्टाउनको लागि कस्तो नीति आवश्यक छ ?
सरकारले खानीसम्मको बाटो, विद्युत लाइन बनाउने लगायतका सुविधा दिए पनि अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जग्गा सोध भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । दोहोरो नीति हटाउनु पर्छ । अरुलाई दिएका जस्तै छुट दिनुपर्छ । सिमेन्टमा ९६ प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
विगतका सरकारको समयावधि नौ महिनाको हुन्थ्यो । धेरै लामो समयपछि स्थीर सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले पनि आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ । आर्थिक सम्वृद्धिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ । अब औद्योगिक क्रान्ति आउँछ ।
अहिले प्रमुख समस्या उद्योग स्थापना गर्न जग्गा समस्या छ । यसमा ठूलो प्रश्न चिन्ह छ ।अहिले सातै प्रदेशमा औद्योगिक पार्क बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यो सकरात्मक छ । हेटौंडा, शक्तिखोर लगायत सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनायो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सजिलो छ । नभए कुनै उद्योग सुरु ग¥योकी बस्ती बस्न सुरु गरिहाल्छन् । पछि त्यही बस्ती उद्योगको लागि टाउको दुखाई बन्छ।
किन पव्लिकमा जाने योजना बनाउनु भयोे ?
हाम्रो पहिलेदेखिनै केही अंश जनतामा जाऔं भन्ने थियो । हुन अहिलेसम्म पारदर्शीनै छौं । अझै बढी कसरी पारदर्शी हुन सकिन्छ ।
जनताको सहभागिता गराउँदा कम्पनीको ग्रो हुँदा त्यसलाई सबै लाभान्वित हुन सकुन् भन्ने सोच राखेर चार वर्ष अघि पव्लिकमा जाने निर्णय गरेका हौं । सरकारको नियम अनुसार पव्लिकमा जान लगातार तीन वर्षदेखि प्रोफिटमा गएको हुनुपर्छ । पव्लिकमा जान आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं । स्वतन्त्र भ्यालुएटरबाट भ्यालुएसन गराएर, ग्रेडिङ पनि गरेका छौं।
शिवम् सिमेन्टले कहिलेदेखि आइपिओ जारी गर्दैछ ?
साउन १३ गतेदेखि स्थानीयको लागि दुई प्रतिशत छुट्टयाएका छौं । आठ लाख ८० हजार कित्ता सेयर २५ प्रतिशत छुट दिन लागेका हौंं । स्वीकृत भएको चार सय रुपैयाँमा स्थानीयलाई तीन सय रुपैयाँमा दिने तयारी गरेका छौं । आह्वान पत्र ३ गते आइसकेको छ ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी कति हो ?
तीन सय ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।
कति प्रतिशत सेयर पव्लिकमा लैजाने योजना छ ?
दुई प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र र १० प्रतिशत साधारण जनतासहित कुल १२ प्रतिशत पव्लिकमा जान्छ ।
चैत्रमा व्यालेन्स सिट बनाउँदा २ सय १६ करोड रुपैयाँ रिजर्भमा थियो । भ्याट बाहेक करिब अहिलेसम्म एक हजार करोडबढिको सेल्स रहेको छ ।पव्लिकमा सेयर जारी गर्ने सिमेन्ट मध्ये शिवम् सम्भवत पहिलो सिमेन्ट उद्योग हो ।
शिवम् सिमेन्टको सवल पक्ष के हो ?
हामीले एउटैमात्र शिवम् ब्राण्ड बनायौं । नेपालमा तीन थरीका सिमेन्ट भए पनि ओपिसी मात्र बनाएका छौं । हामी आउँदा १०÷१२ प्र्र्तिशत ओपिसीको बजार थियो ।
अहिले ओपिसी ब्राण्डका सिमेन्ट मुलुकभर लोकप्र्रिय भएका छन् । सिमेन्ट उत्पादनमा कुनै सम्झौता नगरी गुणस्तर कायम गरेकाले शिवम् ब्राण्डनै आँफैमा प्रख्यात भएको छ । ९६ प्रतिशत लाइम स्टोन र चार प्रतिशत जिप्सन मिलाउने हो।
कुल उत्पादन कति छ ?
उत्पादन सुरु गर्दा सात सय टन ग्राण्डिङ र १२ सय टन क्लिंकरबाट सुरु गरेको हो । अहिले क्षमता बढाएर तीन हजार टन ग्राण्डिङ र १९ सय टन क्लिंकरमा गएका छौं ।